नेपाल–नामिविया क्रिकेट : दबाबमा परेको टोलीलाई शरदकै भरोसा
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं । नेपाल र नामिवियाबीचको विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिपको एक दिवसीय क्रिकेट घरेलु मैदानमा जारी छ । नामिवियाले दिएको एक सय ९६ रनको चुनौती पछ्याएको नेपाल नामिवियाका बलरसामु दबाबमा परेको छ । नेपालले व्याटिङ भरोसा गरेका कप्तान पारस खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, नरेश बुढाऐर आउट भएका छन् । भरोसा गरेका खेलाडी आउट भएपछि नेपाल दबाबमा परेको छ । यस्तै, यु–१९ कप्तान राजु रिजाल समेत सस्तैमा आउट भए । अब लामो समय नेपाली व्याटिङ सम्हालेका मध ... बाँकी अंश»
ज्ञानेन्द्र र नरेश आउट, पारस र शरदको भरोसामा खेल
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं । ओपनरको चर्चाबीच नामिवियाविरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेटमा ओपनिङ गरेका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र नरेश बुढाऐर सम्मानजनक प्रदर्शन गरेर आउट भएका छन् । मल्लले ४० बलमा २१ रन बनाए भने । नरेशले ३० बलमा १६ रन बनाए । नरेशले एक छक्का प्रहार गर्दा ज्ञानेन्द्रले १ चौका प्रहार गरे । निकै भरोसा गरिएका ज्ञानेन्द्र आउट भएपछि व्याटिङ सम्हाल्ने जिम्मा कप्तान पारस खड्का र मध्यक्रममा व्याट्सम्यान शरद भेषावकरको काँधमा आएको छ । पारस र शरदकै काँधमा ट ... बाँकी अंश»
नेपाल–नामिविया क्रिकेट : नेपाल ५ विकेटले विजयी (लाइभ)
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं । नामिवियाविरुद्धको विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिपको एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल ५ विकेटले विजयी भएको छ । नामिवियाले दिएको एक सय ९६ रनको चुनौती पछ्याएको नेपालले १७ बल बाँकी छँदै विकेट गुमाउँदै जित हासिल गरेको हो । नेपालका लागि शरद भेषावकर र विनोद भण्डारीले उत्कृठ पारी खेले । नेपाल ५ विकेटले विजयी 16:49:48 नेपाल जित नजिक । १८ बलमा ३ रन आवश्यक । 16:43:15 ४६ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा १ सय ८४ रन । 16:37:46 नेपा ... बाँकी अंश»
नेपाललाई नामिवियाको १९६ रनको चुनौती
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिपमा नामिवियाले नेपाललाई एक सय ९६ रनको चुनौती दिएको छ । टस जितेर पहिले व्याटिङ गरेको नामिवियाले निर्धारित ५० ओभरका ९ विकेट गुमाएर एक सय ९५ रन बनायो । नेपाली बलरले दबबा राख्दै नामिवियालाई २ सय रन पार गर्न दिएनन् । यद्यपि, भरीभराउ दर्शक सामु पहिलोपट खेलेको नामिवियाले संयमिति व्याटिङ गर्दै सम्मानजनक प्रर्दशन गरेको छ । नेपाल केही बेरमा व्याटिङ गर्ने छ । नामिवियाका लागि सरेल बर्गरले ३८ र ... बाँकी अंश»
नेपाल –नामिविया क्रिकेट : नेपालको बलिङ दबदबा ! दर्शकको उत्साह
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं । बसन्त रेग्मीले तेस्रो विकेट लिएसंगै नामिविया अन्तिम ओभर बाँकी छँदा दबाबमा छ । बसन्तले आफ्नो तेस्रो सिकार सरेल बर्गरलाई बनाए । सबैभन्दा बढी ३८ रन बनाएकामा बर्गर राजु रिजालको स्टम्पिङले आउट भए । ........................................... नामिवियाका व्याट्सम्यान निकोलस स्कोल्ज रन आउट भएसंगै नेपाललाई सातौं सफलता मिलेको छ । उनले खेलमा सबैभन्दा बढी बल खचिएका छन् । एक चौका प्रहार गरेका उनले ५२ बल खर्चिदा १८ रन मात्रै बनाए । बाँया हातले ब्याट समात्ने स्कोल्जले एक द ... बाँकी अंश»
नेपाल–नामिविया क्रिकेट : सन्दीप र बसन्तबाट तेस्रो विकेट हासिल
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं । नेपाल नामिवियाबीचको विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको एक दिवसीय क्रिकेट कीर्तिपुर मैदानमा जारी छ । नामिवियाले पहिले व्याटिङ गरिरहेको छ । सो समाचार तयार पार्दा सम्म नामिवियाले २० ओभरमा ३ विकेट गुमाएर ९३ रन बनायो । नेपालका लागि पहिलो विकेट लिएका सोमपाल कामीले दोस्रो विकेट लिन भ्याइसकेका छन् । उनले कप्तान र विकेट किपरलाई बलिङकै सिकार बनाए । तेस्राे विकेटमा लागि भने नेपालले संघर्ष गर्नु परेको छ । यु–१९ का तारा एवं लेग स् ... बाँकी अंश»
सोमपालको सफलता : नेपालका लागि लिए दुई विकेट (अपडेट)
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं । नेपाल र नामिवियाबीचको विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिपको खेल कीर्तिपुर मैदानमा जारी छ । टस जितेर पहिले व्याटिङ रोजेको नामिवियाले कप्तान स्टेफन बार्डलाई पहिलो विकेटका रुपमा गुमायाे । यस्तै सोमपालले अर्को विकेट लिएका छन् । ७ ओभरमा ४२ रन दिएको नेपाललाई २ विकेट हासिल भएको छ । नेपालका तीब्र गतिका बलर सोमपाल कामीले बार्डलाई आउट गरे । बार्डले आठ बलमा एक चौका प्रहार गर्दै १८ रन बनाए । सोमपालले १ ओभर ४ बलमा १५ खर्चेर विकेट हासिल गरे । २ ओर ... बाँकी अंश»
नेपाल–नामिविया क्रिकेट : नेपाली टोलीलाई उर्जा दिन आतुर समर्थक (फोटोफिचर)
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं । नेपाल र नामिवियाबीचको विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिप हेर्न नेपाली क्रिकेट समर्थक उत्साहजनक सहभागिताका लागि कीर्तिपुर पुगेका छन् । पुग्ने क्रम समेत जारी छ । हातहातमा नेपालको झण्डा, चौका–छक्का लेखेका प्लेकार्ड मात्रै छैनन् । आइ लभ नेपाल ‘म नेपाललाई माया गर्छु’ लेखिएका टिसर्टधारीहरु समेत देखिएका छन् । त्यति मात्र होइन गालामा नेपालको झण्डा बनाउने, पेन्टिङ गर्ने गराउनेहरुको भीड नै छ । यसबाट खेल प्रतिस्ठाका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय ... बाँकी अंश»
नेपाल–नामिविया क्रिकेट : नेपाललाई १९६ रनको चुनौती (लाइभ अपडेट)
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिपमा नामिवियाले नेपाललाई एक सय ९६ रनको चुनौती दिएको छ । टस जितेर पहिले व्याटिङ गरेको नामिवियाले निर्धारित ५० ओभरका ९ विकेट गुमाएर एक सय ९५ रन बनायो । नेपाली बलरले दबबा राख्दै नामिवियालाई २ सय रन पार गर्न दिएनन् । यद्यपि, भरीभराउ दर्शक सामु पहिलोपट खेलेको नामिवियाले संयमिति व्याटिङ गर्दै सम्मानजनक प्रर्दशन गरेको छ । नेपाल केही बेरमा व्याटिङ गर्ने छ । नेपाललाई १९६ रनको चुनौती 12:52:08 ... बाँकी अंश»
नेपाल–नामिविया क्रिकेट : नामिवियाले टस जितेर पहिले व्याटिङ राेज्यो
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं ।नेपाल र नामिवियाबीचको विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिप खेल सुरु भएकाे । कीर्तिपुर मैदानमा सुरु भएको खेलमा नामिवियाले टस जितेर पहिले व्याटीङ रोजेको छ । नामिवियाले व्याटिङ राजेपछि नेपाल पहिले फिल्डङ गर्ने छ । नेपाल पासर खड्काको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको छ भने, नामिवियाको कप्तानी स्टेफन बार्डले गरिरहेका छन् । तेस्रो चरणको खेलमा नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाब छ । ... बाँकी अंश»
नेपाल–नामिवियाका खेलाडी को कस्ता ? ‘कस्लाई कस्को भर ?’
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, काठमाडौं । नेपालले आज नामिवियासंगको विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिपको एक दिवसीय खेल आफ्नै घरेलु मैदान कीर्तिपुरमा खेल्दै छ । च्याम्पियनसिपको अर्को एक दिवसीय सोमबार कीर्तिपुरमै हुने छ । नेपाली टोलीलाई घरेलु समर्थक, परिचित मैदान र उर्जाशील खेलाडीको पूरा साथ छ । त्यतिमात्र नभई भरीभराउ दर्शक सामु पहिलो पटक खेल्न लागेको अफ्रिकी टोली नामिवियाले आफुहरुलाई नेपालसंग खेल्न चुनौती हुने बताइ सकेको छ । यद्यपि, नेपाललाई सहजै जित निकाल्ने वातावरण नहुन सक्छ ... बाँकी अंश»
आईपीएल क्रिकेट: दिल्लीद्वारा पञ्जाब पराजित
२०७३ बैशाख ३ शुक्रबार, काठमाडौं। भारतमा जारी आईपिएल क्रिकेटमा दिल्ली डेयरडेविल्सले किङ्ग्स ईलेभन पञ्जाबलाई ८ विकेटले पराजित गरेको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको पञ्जाबले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १११ रन बनाएको थियो। पञ्जाबका मनन बोहोराले ३२ रनको योगदान गरेका थिए भने परदिप साहुले १८ रन बनाएका थिए। दिल्लीका अमित मिश?राले ४ विकेट लिएका थिए। जवाफमा ब्याटिङ गर्न ओर्लेको दिल्लीले १३.३ ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै ११३ रन बनाएर ८ विकेटको जीत हात पारेको हो। दिल्लीक ... बाँकी अंश»
विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपाल–नामिवियाबीचको क्रिकेट यूटुवमा हेर्न पाउने (लिङ्कसहित)
२०७३ बैशाख ३ शुक्रबार, काठमाडौं । नेपाल र नामीवियाबीच शनिबार विहान हुने आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको खेल नेपाल टेलिभिजन (एनटिभी प्लस) र यूटुवबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएको छ । प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण टेलिभिजन र यूटुवमा हुने भएपछि देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुले बसिरहेकै ठाउँबाट खेल हेर्न पाउने छन् । टेलिभिजनले देशभर र यूटुवले विदेशमा बस्नेहरुलाई सजिलो हुने भएको छ । नेपाल टेलिभिजनले ‘नेपाल टेलिभिजन लाइभ स्टेमिङ’ भन्दै यूटुव लाइभको व्यवस् ... बाँकी अंश»
नेपाल नामिविया क्रिकेट : सुरक्षा कडाई, ‘दर्शकले पानीका बोतलसमेत लान नपाउने’
२०७३ बैशाख ३ शुक्रबार, काठमाडौं । नेपाल र नामीवियाबीच शनिबार विहान हुने आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजनको खेलका लागि आवश्यक सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय हुने भएको छ । बिहान सवा ९ बजेदेखि हुने एक दिवसीय खेलमा नेपाल प्रहरीले मैदान वरपर सुरक्षा दिनेछन् भने, थप सुरक्षाको आवश्यकता परे सशस्त्र प्रहरीको कालिञ्चोक गण कीर्तिपुरको तयारी टोली परिचालन हुने बताइएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीको नेतृत्वमा खटिएको सुरक्षा टोलील ... बाँकी अंश»
‘नेपाल फेरि एक पटक पारस, ज्ञानेन्द्रको व्याटिङमा निर्भर’
२०७३ बैशाख ३ शुक्रबार, काठमाडौं । शनिबार घरेलु मैदानमा हुने नामिवियाविरुद्धको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन च्याम्पियनसिपको खेल नेपालकै पक्षमा रहने धेरैको अड्कल छ । नेपाली टोलीका प्रशिक्षक तथा खेल व्यवस्थापकहरुले समेत नेपालले नै खेल जित्ने ठोकुवा गरेका छन् । उता, पाहुना टोलीका प्रशिक्षक र कप्तानले समेत नेपाली टोलीसंग खेल्नु चुनौती हुने बताइसकेका छन् । यस अवस्थामा नेपाली टोली कस्तो खेल पस्किन्छ भन्ने फिल्डको स्थिति हेरेर मात्रै थाहा हुने नेपाली टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाट ... बाँकी अंश»
च्याम्पियन्स लीग सेमीफाईनल ड्र: बायर्न-एथ्लेटिको र रियाल-सीटी भिड्ने
२०७३ बैशाख ३ शुक्रबार, काठमाडौं। च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनल ड्र सार्वजनिक पहिलो सेमी फाइनलमा रियल मड्रिड र म्यानचेस्टर सिटी तथा दोस्रो सेमिफाइनलमा जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख र स्पेनी क्लब एटलेटिको म्याड्रिड भिड्ने भएका छन। 'होम तथा अवे' गरि दुई लेगमा हुने खेलको विजेता टोलीले फाईनलमा उपाधीको लागि खेल्ने छन्। रियाल मड्रिडले उल्फ्सवर्गलाई क्वार्टरफाईनलमा पराजित गरेको थियो भने म्यानचेष्टर सीटीले पिएसजीलाई पराजित गरेर सेमीफाईनलको यात्रा तय गरेको हो। त ... बाँकी अंश»
पूर्वका व्यवसायीहरूमा क्रिकेटको क्रेजः जो व्यवसाय छाडेर खेल हेर्न दौडन्छन्
२०७३ बैशाख ३ शुक्रबार, काठमाडौ। नेपालमा पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटका खेलाडिहरूको अथक प्रयास र उनीहरूको लगनशीलकाका कारणले नेपाली क्रिकेटले एउटा नयाँ उचाई भेटेसँगै क्रिकेट प्रति सामान्य नागरिकको समेत क्रेज बढ्दै गईरहेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दिएको यो सफलतको कारण नै भन्नुपर्ला नेपालीहरूमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट खेल प्रतिको मोह पनि दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको छ। नेपाली क्रिकेटको लागि सबैभन्दा उर्भर भूमि हो नेपालको पूर्वी क्षेत्र। पूवी नेपालमा देखिएको नेपाल ... बाँकी अंश»
लिभरपुल यूरोपा लिगको सेमिफाइनलमा, एथ्लेटिक बिल्वाओ बाहिरियो
२०७३ बैशाख ३ शुक्रबार, एजेन्सी । इङ्गलिश क्लब लिभरपुल जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुण्डलाई हराउँदै यूरोपा लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । घरेलु मैदानमा भएको क्वार्टरफाइनल दोस्रो लेगको खेलमा ४–३ को जित निकाल्दै लिभरपुल सेमिफाइनलमा पुगेको हो । यसअघि, बोरुसियाको मैदानमा भएको पहिलो लेगको खेल १–१ गोलको बराबरीमा सकिएको थियो । लिभरपुल समग्रमा ५–४ ले विजयी भयो । बोरुसियाले खेलको सुरुवाती ९ मिनेटमै २–० को अग्रता लिएपनि दोस्रो हाफपछि लिभरपुलले उत्कृष्ट पुनरागमन गर ... बाँकी अंश»
आईपिएल: धोनीको पुणेलाई रैनाको गुजरातले हरायो
२०७३ बैशाख २ बिहिबार, काठमाडौं। गुजरात लायन्सले पुणे सुपर जायन्ट्सलाई ७ विेकटले पराजित गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटीङ गरेको भारतिय क्रिकेट कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको पुणेले निर्धारित २० ओभरमा १६३ रन बनाएको थियो। उसकालागि दक्षीण अफ्रिकी टि-२० क्रिकेट कप्तान फाप डुप्लेसीले ६९ रन बनाएका थिए। ४३ बलमा ४ छख्का र ५ चौकाको मदतले डुप्लेसीले उक्त रन बनाएका थिए। केविन पिटर्सनले ३७ रनको योगदान दिएका थिए। गुजरातका परविण ताम्बे र रविन्द्र जडेजाले २-२ विेकट हात पारे ... बाँकी अंश»
क्रिकेटका यि बाल प्रशंसकले हेर्ने भए नेपाल र नामिबियाबीचको खेल
२०७३ बैशाख २ बिहिबार, पर्वत। नेपाली क्रिकेटका बाल प्रशंसक प्रशान्त न्यौपानेले अन्ततः वैशाख चार र छ गतेको खेल हेर्न पाउने भएका छन्। नेपाल र नामिबिया बिच वल्र्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको तेश्रो राउण्डका दुई खेल उनले हेर्न पाउने भएका हुन्। क्रिकेट पर्वत र ग्रेट हिमालयन क्रिकेट एकेडेमी काठमाण्डौको समन्वयमा उनलाई भोलि काठमाण्डौ लगिने तयारी भईरहेको क्रिकेट पर्वतका अध्यक्ष सुजन शर्मा पौडेलले बताए। क्रिकेटप्रेमी अन्य बालबालिकाको लागि पनि उत्प्रेरणा जग ... बाँकी अंश»